Chigadzirwa & Sevhisi - JDL Global Environmental Dziviriro, Inc.
Mushure memakore angangoita makumi maviri ekuvandudza, kambani yedu yakagadzira seti yezvigadzirwa uye masevhisi neFMBR tekinoroji uye seyakadzika. Izvo isu zvatinokupa iwe haisi yedu chete FMBR zvigadzirwa asiwo seti yemhando yepamusoro uye yakura sewage kurapwa mhinduro.
Yakabatanidzwa FMBR Midziyo
Iyo yepamusoro yakasanganiswa yekuchenesa mvura yekushandisa, inongoda prereatment system, marasha system uye shoma basa rehurumende kuvaka WWTP, izvo zvinoita kuti basa rekuvaka rive nyore uye nekukurumidza. Inokodzera kuhotera, mutambo unoyevedza, chikoro, gorufu, nhandare, nharaunda yekutengesa, yemadhorobha uye yekumaruwa, kurapwa kwakadzika uye nezvimwe.
Yakarongeka tsvina tsvina chirimwa
Iyo yakanyatsobatanidzwa midziyo inosanganiswa inongoda kuwedzera iyo prereatment system iyo nzira yekubudisira mvura uye hushoma hweinjiniya yehurumende kuvaka sawage yekurapa chirimwa, zvichiita kuvakwa kweiyo yekurapa chirimwa chiri nyore uye nekukurumidza. Iyo inokodzera kune akawanda mafomu ekushandisa senge mahotera, nzvimbo dzinoyevedza, zvikoro zvekushambadzira matunhu, mataundi, uye kugoverwa kugadzirisa.
Sewage kurapwa basa
Tine yakasimba R&D, mainjiniya dhizaini, O&M, matimu ekugadzira ayo anokwanisa kupa mhinduro dzakagadziriswa dzemvura yakasviba, dhizaini yekurapa yemvura yakasviba, chirimwa chekurapa mvura yakasviba O&M, michina yekupa uye yekutsvagisa chirongwa chemvura.
Wastewater Kurapa Mhinduro
WWTP Dhizaini, WWTP O&M
Wastewater Project Investment